Ifolokhwe yeplastiki yaseTshayina (FPF701) umzi-mveliso kunye nababoneleli |Jiuxing
ikepusi yeplastiki yentamo yebhotile ebanzi (SPCB202)
ikepusi yeplastiki yeoli (SPCA120)
iplastiki flip-top cap (SPCA118)
iplastiki flip-top cap kunye nokutsala umsesane (SPCA114)
iplastiki yokusila (SPCE101)
ifolokhwe yeplastiki (FPF701)
ifolokhwe yeplastiki (FPF702)
ikepusi yeplastiki yesinongo (SPCS402)
ikepusi yeplastiki yetinplate can (SPCA1160)
icap yeplastiki yokutya (FPCE507)
icap yeplastiki yokutya (FPCE510)
ikepusi yeplastiki yeoyile ye-injini (PCG705)
ikepusi yeplastiki (PCG704)
ikepusi yeplastiki (PCG703)
ikepusi yeplastiki yesinongo (SPCS401)
iplastiki Screw cap (FPCD601)
ikepusi yobungqina bobusela beplastiki (SPCC301)
Umqheba wefolokhwe ethe tye wamkela uyilo olukhenkcezayo, elenza ukuba imveliso ibonakale ithambile kwaye idlala indima yokuchasa ukutyibilika.Iveliswa kusetyenziswa izinto ezintsha ze-PP zebakala lokutya, ezinokudibana ngokuthe ngqo nokutya.Iimveliso ziveliswa kwindawo yokusebenzela yokucoca engenathuli.
Ikhowudi yemveliso: FPF701
Uhlobo: ifolokhwe yeplastiki
Ukusetyenziswa: Ukutya, okufana nee-noodles.
Ubungakanani: Ifolokhwe yeplastiki: 178mm±0.5mm
Ipakishwe ngokuzimeleyo: Ingenziwa ngokwezifiso (isiseko kwi-MOQ)
Umyalelo Wesiqhelo: Yamkela
Indawo yemvelaphi: eShandong, eTshayina
Igama lebrand: Jiuxing
Umbala: Ingenziwa ngokwezifiso (isiseko kwi-MOQ)
ILogo: ingenza uphawu (isiseko kwi-MOQ)
Isatifikethi: ISO9001.QS.Ezinye iziqinisekiso zingenziwa ukuhlangabezana neemfuno.
inkonzo OEM: Ewe
Izinto zethu eziluhlaza zifikelela kumgangatho webakala lokutya, elingenancasa kwaye lingenabungozi.
Umqheba wefolokhwe ethe tye wamkela uyilo olukhenkcezayo, elenza ukuba imveliso ibonakale ithambile kwaye idlala indima yokuchasa ukutyibilika.Iveliswa kusetyenziswa izinto ezintsha ze-PP zebakala lokutya, ezinokudibana ngokuthe ngqo nokutya.Iimveliso ziveliswa kwindawo yokusebenzela yokucoca engenathuli, eqhutywa ziirobhothi, kwaye ingasetyenziswa ngokuzithemba.Izitayile zemveliso, iinkcukacha kunye nemibala inokwenziwa ngokweemfuno zabathengi.
Sinamava atyebileyo ekwenzeni tableware zeplastiki, Sinenkqubo yemveliso Rigorous, Professional R & D kunye neqela imveliso, emva koko, sibe inkqubo yokuhlola umgangatho ngokungqongqo, ukuqinisekisa ukuba iimveliso Jiuxing ukupakisha unokumthemba.
Ngaphambili: ifolokhwe yeplastiki (FPF701)
Okulandelayo: icephe leplastiki (FPS801)
I-Spoon yePlastiki elahlayo
Amacephe ePlastiki aLahlwayo
Icephe lePlastiki kunye nefolokhwe
Iipuni zePlastiki zePp
itafile yeplastiki elahlwayo (PKFS111)